फेरि आयो दुःखद खबरः दुई जहाज आकाशमा ठोक्किएपछि जलेर खरानी! – भिडियो सहित… – PathivaraOnline
Home > भिडियो > फेरि आयो दुःखद खबरः दुई जहाज आकाशमा ठोक्किएपछि जलेर खरानी! – भिडियो सहित…
फेरि आयो दुःखद खबरः दुई जहाज आकाशमा ठोक्किएपछि जलेर खरानी! – भिडियो सहित…
admin February 19, 2019 February 19, 2019 भिडियो	0
एजेन्सी- भारतको बेंग्लोरमा वायुसेनाका दुई जहाज आकाशमा ठोक्किएरका छन् । वायु सेनाको एयर शो रिर्यसलका क्रममा रहेका एयरक्राफ्ट यलहांका विमानस्थलको आकाशमा एक आपसमा ठोक्किएर खसेको समाचारमा जनाइएको छ ।
सूर्यकिरण एयरक्राफ्टका कै दुई एयरक्राफ्ट ठोक्किदा दुवै एयरक्राफ्टमा रहेका पाइलट भने सकुशल रहन सफल भएको बताइएको छ ।दुवै विमान येलहांकाको न्यू टाउन एरियामा खसेको र दुर्घटनाग्रस्त जहाजले चोट लाग्दा एक सर्वसाधरण नागरिक गम्भिर घाइते भएको बताइएको छ ।२० फेब्रररीबाट सुरु हुने एयर सोको तयारीमा गरिरहेका ती एयरक्राफ्ट दुर्घटनामा परेका हुन् ।
२४ घन्टा नबित्दै अर्को गीत भाइरल, “ए हैजा, नर्क तिर लैजा”, पशुपतिको अर्को गीत फेरि भाइरल ! सक्दो शेयर गरौ !! (भिडियो)
दुखद खबर : सुटिङ को लागि नेपाल आएका सोनु निगम थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना
को हुन् बादी समुदाय, किन आन्दोलनरत छन् उनीहरू ? भिडियो हेर्नुस्